Waaxda Maamulka – HIQ
Adeegyada waaxdan waxaa ka mid ah dejinta misaaaniyadda, maamulka maaliyadda, wax soo iibsiga iyo sahayda, iyo maamulka shaqaalaha. Waaxdu waxey leeyadahay qeyb hossadyada soo socda.
Waaxda xisaabbaadka iyo maaliyadda:
waxaad xisaabinta iyo maaliyadda waxeey masuul ka tahay siinta talo bixinta dhaqalaha iyo misaaniyadda diyaarinta maamulka. Sido kale waxeey maamushaa miisaniyadda loo qoondeeyay maamulka si loo hubiyo qiimaha lacageed, ilaalinta hanitooda iyo kheeyraadka hay’adda isgaarsinta qaranka si looga fogaado si xun u isticmaalka iyo lacag bixinta iyo deymanka dayacan.
Maamulk iyo kheeyradka adanaha:
Qeybt maamulka waxeey maamushaa howlaha maalinlaha ah ee xafiisyada taaso xudun u eh kobcinta shaqeynta kartida leh iyo wax qabadka shaqalaha. Qeybt shaqaalaha ayaa masuul ka ah hormarinta iyo siiheynta shaqalaha aqoonta leh marki la siinayo farsamooyinka wax ku oolka ah iyo wax tarka leh kheeyraadka.
Waaxda Arrimaha Heyadda:
Waxaad arimaha shaqada ayaa masuul ak ah warbaahinta iyo xariirka bulashada istaraatijiyada iyo qabanqaabinta cilmi barista dhacdooyinka, iskuduwida xafisyada gobolada I.W.M